Masinina fanodinana CNC, Ivotoerana fametahana vertika, axis 3 & 4, mpamatsy China
Masinina mihodina amin'ny CNC
Milina fanodinana universal
Masinina fanodinam-baravaran'i CNC
Masinina fanodinana vertika
Masinina fanamafisam-peo marindrano
Milina fandavahana sy fikosoham-bary
Milina Lathe metaly
Ivotoerana fihodinan'ny CNC
Lathe sodina kofehy kofehy
METALY FANORENANA METAL
Milina fanoratana metaly vy
Milina fanenjana ravin-tsolika
Kitapo mihetsiketsika amin'ny valizy TSA40100
Mpanafika Surface Surface TSA2050
Milina fandavahana radial
Eto ianao: an-trano1 / Masinina fanodinana CNC, Ivotoerana fametahana vertika, axis 3 & 4, China S ...
FIVORIANA avo lenta amin'ny fametahana metaly
Fanontaniana?Antsoy izahay amin'ny + 86-15318444939, ary miresaha amin'ny iray amin'ireo solontenanay manam-pahaizana.Azonao atao koa ny mameno ny contact contact.
famaritana sy sary
Cnc afovoany maching650
Latabatra szie: 900 * 400mm
Dia: 600 * 400 * 500mm
Môtô lehibe: 5.5kw
Cnc afovoany maching850
Latabatra szie: 1000 * 500mm
Dia: 800 * 500 * 500mm
Môtô lehibe: 7.5kw
Cnc afovoany maching855
Sesy latabatra: 1000 * 550mm
Dia: 800 * 550 * 550mm
Masinina fanodinana Cnc 736
Latabatra szie: 1250 * 360mm
Dia: 900 * 400 * 500mm
Cnc maching centre 1160
Latabatra szie: 1200 * 600mm
Dia: 1100 * 600 * 600mm
Môtô lehibe: 11kw
Cnc afovoany maching1270
Latabatra szie: 1360 * 700mm
Dia: 1200 * 700 * 600mm
Môtô lehibe: 15kw
Cnc afovoany maching1370
Dia: 1300 * 700 * 600mm
Cnc afovoany maching640
Sesy latabatra: 1000 * 360mm
Dia: 600 * 360 * 450mm
Môtô lehibe: 3.7kw
Masinina fanodinana Cnc 720
Latabatra szie: 600 * 200mm
Dia: 300 * 200 * 300mm
Môtô lehibe: 1.1kw
Raha te-hikirakira ny fiaramanidina (fiaramanidina marindrano, fiaramanidina mitsangana) ianao, lalan-dàlana (lalan-kely, t-slot, slot misy dovetail, sns.), Fizarazarana nify mizara (fitaovana, tsorakazo spline, velaran-tany), lavaka anatiny, karazana curved rehetra ambonin'akanjony, fanamboarana mivaingana ny fanodinana sy fanodinana fanapahana, ny milina fikosohanay CNC no ho safidinao tsara. Ny milina fanodinana CNN dia be mpampiasa amin'ny faritra mandeha amin'ny fiara, fitaovana elektrika, moto, fitaovana, fitaovana, motera ary saha hafa.
Ny safidin'ny milina fanodinana CNC dia miankina indrindra amin'ny halavan'ny workpiece, ny habeny ary ny fomba fanodinana, ho an'ny fanodinana mazava tsara, ny habe kely sy salantsalany ary famokarana miverimberina matetika, ny fampiasana milina fanodinana CNC dia tena mety, raha ampahany lehibe , fanodinana famolavolana bobongolo lehibe, tokony hisafidy centre fanodinana gantry. Ny milina fanodinana manana fari-pahaizana avo lenta dia manolo ny milina fitotoam-bary mahazatra, mampihena ny asan'ny mpiasa, ny fironana izay mampiakatra ny famokarana dia tsy azo ihodivirana. loharano, feno amin'ny antsipiriany, tongasoa eto hanontany.
Lahatsary misy ny milina fanodinana CNC
Hamafisina avo, fahamendrehana avo lenta, haingam-pandeha
(Lazao anay ny zavatra ilainao, hotononinay ao anatin'ny 12 ora ianao)
Inona no atao hoe milina fanodinana CNC?
Ny milina fanodinana CNC dia fitaovana fikosoham-bary mandeha ho azy, afaka manatanteraka fanodinana tsy misy mpiambina. Ny workpiece dia mety ho fikosoham-bary, fandavahana, mankaleo, fanovana indray, fanoratana ary fomba hafa aorian'ny fametahana clamping iray fotsiny. Araka ny endrika, habe, marim-pototra ary ny fahamendrehan'ny faritra amin'ny faritra sy ny fepetra ara-teknika hafa hampivelarana ny fizotran'ny fikirakirana, safidio ny masontsivana fanodinana. Amin'ny alàlan'ny fandaharana manual na programa mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny rindrambaiko CAM, ny programa fanodinana voalamina dia fidirana amin'ny mpanera. Ny hetsika miampy amin'ny tanana dia ampifanarahana mba hampisondrotana ny sangan'asa sy hampifanarahana ny fanapahana, ny fivezivezena mitohy na ny kodiarana tanana hamindrana ny fitaovan'ny milina. Apetraho amin'ny fiandohan'ny programa ny teboka fanombohana ary apetaho ny benchmark an'ny fitaovana. Aorian'ny fanaraha-maso ataon'ny mpanara-maso ny programa dia mamindra torolàlana amin'ny fitaovana servo ilay mpanara-maso. Ny fitaovana servo dia mandefa famantarana fanaraha-maso ny maotera servo. Ny motera ampela dia mampiodina ny fitaovana ary ny motera servo ao amin'ny làlan'ny X, Y ary Z dia mifehy ny fivezivezena amin'ilay fitaovana sy ny fitaovana arakaraka ny lalana iray, mba hahatsapana ny fanapahana ilay sangan'asa.
Ny milina marobe dia afaka mampitombo ny axis fahefatra, eo amin'ny lampihazo mihetsika mba hanampiana fihodinana 360 degre amin'ny lohan'ny fizarana herinaratra, mba hahafahany manatanteraka lavaka famaranana mandeha ho azy, fikosoham-baravarana ary fametahana habakabaka hafainganina eny ambonin'ny habakabaka. tsy misy fatiantoka clamping faharoa mazava tsara.
Masinina fanodinana cnc marina, mety sy mahomby, fitaovana ilaina amin'ny milina vy marina io.
Karazana milina fanodinana CNC
1, Araka ny tari-dalan'ny axis spindle dia mizara ho milina fanodinana CNC, masinina fikosoham-bary CNC, masinina fikosoham-bary CNC, milina fanodinana CNC mitsivalana sy marindrano.
2, Araka ny fiasan'ny fanodinana dia mizara ho an'ny milina fanodinana CNC tsotra, milina fanodinam-batana CNC, milina fanodinana CNC.
3, Araka ny isan'ny axis control dia mizara ho roa-axis CNC milling machine, telo-axis CNC milling machine, roa-axis CNC milling machine, multi-axis CNC milling machine.
4, Araka ny maodely fanaraha-maso ny rafitra servo dia mizara ho rafitra servo misokatra boribory CNC milina fikosoham-bary, milina mihidy servo milina fanodinana milina, milina servo semi-mihidy servo milina fitotoana CNC
Fampiharana ny milina fanodinana CNC
Azo ampiharina amin'ny milina fitrandrahana, maotera, aérospace, fanonta, fonosana, indostrian'ny miaramila, bobongolo, fandefasana, milina lamba, milina fambolena, fitrandrahana metaly, fanodinana fitaovana milina ary fitaovana lehibe hafa ho an'ny indostria.
Rafitra milina fanodinana CNC, singa
Ny ivon-toeram-pivarotana voalohany eto amin'izao tontolo izao dia teraka tany Etazonia tamin'ny 1958. Ny orinasa any Etazonia dia nanisy fitaovana fanovana fitaovana ho an'ny milina fanina sy fikosoham-bary, izay manamarika ny fahatongavan'ilay foibe fanodinana voalohany. Tao anatin'izay 40 taona lasa izay dia nisy karazana ivon-toerana fanodinana milina isan-karazany. Na dia manana endrika sy firafitra samihafa aza izy ireo, dia mazàna dia anisan'ireto manaraka ireto.
1. Fototra fototra
Izy io dia misy fandriana, tsanganana ary latabatra fiasana, izay singa fototra amin'ny rafitry ny milina. Ireo faritra lehibe ireo dia misy vy fanariana vy sy vy vy vy. Tsy maintsy mizaka ny enta-mavesatry ny foiben-toeran'ny masinina sy ny enta-mavesatra mandritra ny milina izy ireo. Noho izany dia tsy maintsy manana henjana avo dia avo izy ireo, ary izy ireo ihany koa no ampahany manana habetsaha sy habe betsaka indrindra ao amin'ny ivon-toeran'ny milina.
2. Ireo singa ampela
Izy io dia misy boaty spindle, motera spindle, spindle ary spindle bear. Ny hafaingan'ny fiandohana, ny fijanonana ary ny fihodinan'ny spindle dia fehezin'ny rafitra fanaraha-maso isa, ary ny fanapahana dia tanteraky ny fitaovana napetraka eo amin'ny spindle. Ny singa ampela dia ny singa famoahana herinaratra ao amin'ny milina ary ny singa manan-danja ao amin'ny foibe fanodinana. Ny firafiny dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny foibe fanodinana.
3. Rafitra fanaraha-maso isa
Izy io dia voaforon'ny fitaovana CNC, mpanaraha-maso programmable, fitaovana servo drive ary motera. Io no ivon'ny ivon-toeram-pamokarana mba hanatanterahana ny hetsika fanaraha-maso sy hifehezana ny fizotran'ny famolavolana.
4. Fanovana fitaovana mandeha ho azy (ATC)
Ny fahasamihafana lehibe indrindra eo amin'ny ivon-toeran'ny milina sy ny milina ankapobeny dia ny fahafahany manamboatra ampahany amin'ny fizotrany maro ary manana andiana fitaovana fanovana fitaovana mandeha ho azy.
5. Rafitra fanaraha-maso isa
Ity no ampahany lehibe amin'ny milina fanodinana CNC, izay misy rafitra fanaraha-maso CNC, tontonana fandidiana, mpamokatra paompy tanana, mpamily, motera servo ary tariby herinaratra. Mifanaraka amin'ny atidohan'ny fitaovana milina CNC, ny programa sy kaody rehetra dia novaina ao amin'ny rafitra CNC.
6. Fiarovana mihidy tanteraka
Ity ampahany ity dia mitovy amin'ny fiadian'ny fitaovan'ny milina CNC, izay afaka miaro ny fitaovan'ny milina amin'ny fahasimbana ivelany, ary koa miaro ny mpandraharaha sy ny tontolon'ny asa amin'ny fitaoman'ilay fitaovan'ny milina. Ny tontonana rafitra sy ny ampahany elektrika dia mila apetraka eo amboniny.
Visy baolina 7
Ny fihodinan'ny motera servo dia tsy afaka mitondra mivantana ny latabatra sy ny spindle hihetsika. Amin'ny alàlan'ny visy baolina, ny fihodinan'ny motera, novaina ho toy ny fivezivezena eo amin'ny latabatra. Ny visy baolina sy ny motera dia ampifandraisina amina fampiraisana. Ny visy sy ny latabatra fiasana dia ampifandraisin'ny voanjo.
Rehefa mihetsika eo ambonin'ilay fotony ny latabatra dia voatery hamokatra fihantsiana amin'ilay fitaovana milina izy. Ny lalamby mpitari-dalana dia mitana ny andraikitry ny fanosorana sy ny fihenan'ny fikorontanana. Misy rafitra baolina na roller ao anatiny. Izy io dia afaka miantoka ny fahamendrehana sy ny hafainganan'ny fivezivezena latabatra.
Rafitra fanosotra 9
Ny paompy solika elektronika dia manatitra ny menaka manosotra mankany amin'ny teboka fanosorana ilay milina fitaovana hanosorana ny visy mitondra ny milina, mba hanatsarana ny fahamendrehana sy ny ain'ny serivisy ao amin'ilay fitaovana masinina. Ny rafitra fanosotra dia rafitra mandeha ho azy mifandraika amin'ny rafitra fanaraha-maso isa ary fehezin'ny rafitra fanaraha-maso isa. Ny fe-potoana sy ny habetsahan'ny fanosorana dia azo fehezina.
Inona no karazana workpiece mety amin'ny fanodinana amin'ny milina fikosohan'i CNC?
Ny ivon-toeran'ny milina CNC dia manana tombony amin'ny automatisation avo lenta, hery avo lenta, avo lenta, hafainganam-pandeha ary azo itokisana avo lenta, saingy ireo tombony ireo dia mifototra amin'ny fepetra sasany. Ny ivon-toeran'ny milina dia afaka mahazo ny tombony tsara indrindra amin'ny toe-javatra mety. Ireto endri-javatra manaraka ireto dia mety indrindra amin'ny ivon-toeram-pamokarana.
1. Ireo singa apetraka amin'ny famokarana tsindraindray sy miverimberina
Ny fangatahan'ny tsena ny vokatra sasany dia cyclical sy seasonal. Raha tsipika famokarana manokana no ampiasaina, dia tsy mendrika ho very izany tombony izany. Ny fahombiazan'ny fikirakirana ny fitaovana tsotra dia ambany loatra, ary ny kalitao dia tsy marin-toerana. Rehefa tapahina soa aman-tsara ny andiany voalohany (faritra) ao amin'ny ivon-toeram-pamokarana, dia azo tazonina ny programa sy ny fampahalalana mifandraika amin'izany, ary ny fananganana ny vokatra manaraka dia afaka manomboka famokarana raha mbola kely ny fotoana fiomanana.
2. Fizarana avo lenta avo lenta
Ny faritra sasany dia mila kely, nefa lafo. Tsy avela hovonoina izy ireo. Izy ireo dia mitaky fametrahana avo lenta sy fotoana fananganana fohy. Raha ampiasaina hikirakira ny fitaovana milina nentim-paharazana dia mila fitaovana milina marobe handrindrana ny asa izy io, ary mora voan'ny fiasan'ny olombelona ny famokarana fako. Raha ampiasaina amin'ny fanodinana ny ivon-toeran'ny milina, voafehy tanteraka amin'ny alàlan'ny programa ny fizotry ny famokarana, izay manalavitra ireo antony manelingelina amin'ny fikorianan'ny fizotrany, ary manana fahombiazana sy kalitao avo lenta ny habetsany dia milamina.
3. Fizarana maro karazana sy ampahany kely
Ny fahafaha-manamboatra ny famokarana foibe fanaovana milina dia tsy hita taratra amin'ny valinteny haingana amin'ny fepetra takiana manokana amin'ny fikarakarana ny faritra fa mety hahatratra haingana ihany koa ny famokarana betsaka ary hibodo haingana ny tsena.
4. Sombiny misy firafitra sarotra sy fanodinana marobe ary fikirakirana tobin-tserasera marobe
Ny faritra sasany dia manana rafitra sarotra ary mila fitaovana fanodinana lafo vidy mba hikirakira ireo fitaovan'ny milina tsotra. Ny fampiasana milina fanodinana CNC koa dia mila manolo fitaovana sy fitaovana mandritra ny fotoana maro. Amin'ny fampiasana ny ivon-toeran'ny milina, azo atao ny mameno ny fandavahana, ny fikosoham-bary, ny mankaleo, ny fikolokoloana, ny fitrandrahana ary ny fanodinana dingana maro hafa indray mandeha.
5. Sarotra ny mandrefy ampahany
Ny ivon-toeram-pivarotana dia manana tombony bebe kokoa amin'ny famolavolana karazana faritra ity
Inona ny kaody G sy kaody M?
Ny kaody M dia manana anjara asa fanampiny amin'ny fitaovana milina CNC. Ny fiasan'ny switch sasany dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny fampiasana andraikitra fanampiny, toy ny M3: fihodinan'ny mandroso spindle, M4: fihodinan'ny spindle, sns.
Kaody G, manomàna fiasa. Kaody G no torolàlana mahatonga ny masinina hametraka fomba fanodinana sasany. Toy ny interpolation linear, interpolation boribory, fanonerana fitaovana, ny fametrahana ny rafitra mandrindra, sns.
Ny torolàlana M sy ny kaody G dia fiasa fototra amin'ny fandaharana milina NC. Miaraka amin'ireo kaody ireo dia azo tanterahina ny andiana hetsika
Maharitra hafiriana ny mianatra kaody G?
Elaela ny fotoana ianarana ilay kaody. Tsy ilaina ny mamerina ny kaody rehetra. Azonao atao ny manontany ny boky momba azy rehefa manadino azy ianao. Fa ny lakileny dia ny hifehezana ny kaody fampiharana tsirairay. Betsaka ny naoty sy toro-hevitra, rehefa mampiasa saina hahatakatra kaody ianao dia hahazo sy hahatadidy mafy. Aza adino, aza atao tsianjery ilay kaody, fa ny fahaizan'ny fampiharana indrindra. Maro amin'ireo kaody no mahazatra.
Araka ny fototra iorenan'ireo mianatra, ny fotoam-pianarana fandaharam-pianarana CNC dia hafa ihany koa, izay mazàna dia amam-bolana maro na taona maro mihitsy aza.
Fanaraha-maso isan'andro: rehefa miasa ny masinina dia zahao tsirairay ireo fisehoan-javatra manaraka ireto. Raha misy tsy fahasalamana hita, tadiavo avy hatrany ny antony ary esory izany. Raha misy olana tsy voavaha dia mba ampahafantaro anay haingana araka izay tratra ny orinasanay mba hamongorana ny tsy fetezana haingana araka izay tratra.
1.1 alohan'ny fanombohana
1) Hamarino raha simba na tsy mifanerasera ny tsipika herinaratra, ny tsipika rehetra ary ny tadin'ny fantsona.
2) Hamarino raha tsy tokony ampidirina amin'ny haavon'ny solika ao anaty paompy menaka fanosorana ny menaka fanosorana ary raha mahazatra ho an'ny magazine magazine mitsangana ny menaka manara-penitra ny boatin-kankana.
3) Hamarino raha ara-dalàna ny fampifangaroana teboka telo.
4) Hamarino ny fantson-diloilo sy ny mpiray raha misy ny fivoahan'ny solika.
5) Hamarino raha ara-dalàna ny tsindry ataon'ny rivotra amin'ny teboka telo ary raha ovaina araka ny takiana ny fanerena fanerena.
6) Hamarino raha mila manampy ranoka manapaka ny haavon'ny ranoka manapaka ny tanky rano.
7) Hamarino raha ara-dalàna sy azo itokisana ny fitaovam-piarovana, ary tsy tokony hisy mpiasa amin'ny faritra mampidi-doza.
2.1 aorian'ny fanombohana
1) Hamarino raha ara-dalàna ny fiakaran'ny maripanan'ny fody ary raha misy feo tsy mahazatra.
2) Hamarino raha ara-dalàna ireto entana manaraka amin'ny paompy menaka manitra ireto.
a. Ny tsindry famatsiana solika dia eo anelanelan'ny 3kfg / cm2-4kfg / cm2
b. Na ara-dalàna ny fihinanana menaka fanosorana (raha haingana loatra ny fanjifana, dia tsy maintsy jerena ny fizaran-tsolika raha misy ny famoahana solika).
d. Na ara-dalàna ny ora fiasan'ny paompy solika (3-6cc / fotoana / 5 minitra no atolotra).
3) Hamarino raha efa vita ny programa fanodinana.
4) Hamarino raha feno ny fitaovana milina.
5) Hamarino raha niova ny lalao ary na niova ny datum-ny.
6) Tandremo sao mamokatra hafanana avo be amin'ny fotoana rehetra ilay mpanova.
7) Ataovy ao anaty sivana foana ny rano ao anaty fitambaran-teboka telo mba hahazoana antoka fa maina ny entona.
8) Na ara-dalàna ny fitsofana ny spindle.
1.3 aorian'ny fandidiana
1) Esory ny poti rehetra ao anaty latabatra, ampinga telo-hazo, fitoeran-drano, efijery sivana ary ampinga lehibe.
2) Ny lavaka anatiny an'ny spindle dia tsy maintsy soloina madio.
3) Ny chippings amin'ny tahony dia tokony hesorina amin'ny fotoana rehetra sy isaky ny 8 ora.
4) Afindra eo afovoan'ny fikorotanana ny famaky telo mba hitazomana ny fandanjana.
5) Aorian'ny fametahana diloilo tsy misy harafesina amin'ny latabatra fiasana, esory ny poti.
6) Aorian'ny faran'ny fiovana dia tokony diovina indray mandeha ny fisehoan'ny masinina manontolo.
7) Hamarino raha mihidy tsara ny varavaram-piarovana.
8) Hamarino raha maty ny jiro elektrika.
9) Hamarino raha maty ny jiro loharanom-pahefana.
2 fikojakojana tsy tapaka
2.1 torolàlana momba ny fikojakojana
1) Mba hiantohana ny fiarovana ny asa fikojakojana dia tokony hidina ny varavarana sy ny ampinga elektrika rehetra, indrindra ny boaty fanaraha-maso sy ny boaty fandidiana.
2) Fady ny mampiasa basy rivotra na rivotra voafehy hanadiovana ny fitaovan'ny milina (hisorohana ny fako sy ny vovoka mitsoka ao anaty fitondra na fidirana).
3) Alohan'ny hanatanterahana ny asa fikojakojana sy fanamboarana etsy ambony sy ao ambadiky ny fitaovana milina ao amin'ny fonony miaro dia alao antoka fa hovonoinao ny jiro mandeha amin'ny takelaka fiasa, ary vonoy ny herinaratra. Mandritra izany fotoana izany dia ahantona ireo fambara fampitandremana mba tsy hamonoan'ny hafa ilay masinina.
2.2 fikojakojana isan'andro
1) Esory ny poti, ny vovoka ary ny masoandro amin'ny faritra rehetra miharihary amin'ny fitaovana sy ny milina, ary esory ny puce, ny vovoka ary ny sundries amin'ny tsipika fampitaovana na fitaovana fanampiana fanampiny.
2) Diovy ny kofehin'ny spindle.
3) Hamarino raha mila manampy menaka vaovao ny haavon'ny solika ao anaty paompy menaka fanosorana ary raha ao anatin'ny faritra voatondro (3-5kgf / cm2) ny tsindry menaka.
4) Zahao ny haavon'ny haavon'ny solika ao anaty fitoeran-drano mitambatra telo raha toa ka mila ampiana menaka vaovao.
5) Hamarino raha maty tanteraka ny ranon'ny sivana ao anatin'ilay teboka telo.
6) Hamarino raha ara-dalàna ny tsindry ataon'ny air circuit (sanda ≥ 6 kgf / cm2).
7) Hamarino raha misy famoahana solika ao amin'ny faritry ny solika sy ny tonon-taolana, ary makà fitsaboana sahaza azy.
8) Diovy ny ampahany mifatotra amin'ny tahony tsirairay ao amin'ny magazine.
9) Hamarino raha mila ampiana ny tsiranoka fanapahana ary atombohy ny masinina mba hijerena raha toa ka mandeha ara-dalàna ny rafitra fampihenana.
10) Manadio ny faritra mandeha amin'ny herinaratra ary mametra ny switch.
11) Jereo raha ara-dalàna daholo ny jiro miasa na jiro fampitandremana.
12) Ataovy madio sy milamina ny tontolo manodidina ny masinina.
13) Zahao ny fanapahana ny famoahana karbôna be loatra.
2.3 fikojakojana isan-kerinandro
1) Manatanteraka fikojakojana isan'andro
2) Hamarino ny tampon'ny spindle sy ny faritra mihazakazaka raha misy feo sy fahasimbana tsy mandeha amin'ny laoniny ary diovy ny manodidina ny spindle.
3) Hamarino raha mihetsika ny fiandohan'ny axis tsirairay.
4) Diovy ny efijery sivana amin'ny fitoeran-drano, ary ampio coolant rehefa tsy ampy.
5) Diovy ny efijery sivana natambatra teboka telo.
6) Hamarino raha milamina ny fihazana ny spindle sy ny hetsika famaha.
7) Hamarino raha milamina ny fanovana fitaovana.
8) Hamarino raha mandeha ara-dalàna ny paompy fanosorana (3-6cc / fotoana / 5 minitra, tsindry solika 3-5kfg / cm2).
2.4 fikojakojana isam-bolana
1) Manatanteraka fikojakojana isan-kerinandro.
2) Diovy ny atin'ny boaty fanaraha-maso, tontonana fandidiana ary efijery fanivanana hafanana.
3) Zahao ny haavon'ny latabatra fiasa ary alao antoka fa voahidy ny vatofantsika vatofantsika.
4) Hamarino raha mila ahitsy ny tadin'ny zana-axis telo.
5) Hamarino ny fiasan'ny valizy solenoid sy ny switch switch.
6) Diovy ny borosy amin'ny lalan'ny mpiorina telo-axis ary havaozy raha ilaina.
7) Hamarino raha tsy mifandray tsara ianao rehefa malalaka ny mpampifandray tariby.
8) Hamarino raha tsy misy sakana ny fizaran-tsolika, ary diovy ny efijery sivana amin'ny mpiray izay tsy misy sakana.
9) Hamarino raha ara-dalàna ny fitaovana interlock sy ny timer, zahao raha manana tsindry mety izy ary manadio azy.
10) Arotsaho ny tsiranoka fanapahana, diovy ny fitoeran-drano sy ny fantson-drano, ary apetaho ilay tsiranoka fanapahana.
11) Hamarino fa ny mpanara-maso NC dia miasa ara-dalàna.
12) hosorana menaka indray mandeha isam-bolana ny vatan-kazo miady amin'ny lanjany.
2.5 fikojakojana antsasaky ny taona 2.5
1) Manatanteraka fikojakojana isam-bolana
2) Unit NC madio, vondrona fanaraha-maso ary fitaovana milina.
3) Soloy ny rafitra menaka fanosotra diloilo, atsofohy ny boaty fitaovan'ny magazine fitaovana mitsangana ary diovy ny lavaka anatiny.
4) Zahao ny fahazoan-dàlana ambadika an'ireo shaft telo ary ampifanaraho.
5) Zahao ny habetsaky ny zana-axis telo ary ampifanaraho izany.
2.6 fikojakojana isan-taona
1) Diovy ny motera rehetra.
2) Jereo raha saro-pady sy mahazatra ny fanaraha-maso eo amin'ny tontonana fandidiana.
3) Hamarino raha mandeha tsara ny programa fitsapana.
4) Fantaro raha ampiasaina amin'ny ara-dalàna ny rojo refy.
5) Esory ny tahiry karbona amin'ny fifandraisan'ny mpampitohy rehetra ao anaty boaty elektrika ary esory madio.
Fizarana 3 sy fikojakojana
3.1 ireto asa manaraka ireto dia tokony hatao alohan'ny hisolo ny ampahany.
1) Soraty ny laharan'ny milina.
2) Manaova fanamarihana momba ny famaritana sy ny marika amin'ireo faritra nosoloina.
3) Asio marika ny fifandraisana misy eo amin'ilay ampahany sy ny faritra hafa mifandraika amin'izany, mba hivondronam-bolo indray.
3.2 fitandremana fikojakojana
1) Ny mpiasa mpikirakira dia tsy maintsy mahatakatra ny dingana fanidiana ary manatanteraka ny asa fanamboarana aorian'ny fanidiana.
2) Rehefa manamboatra ny atitany:
a. Tapaho aloha ny herinaratra;
b. Raha ilaina ny mandeha amin'ny herinaratra amin'ny fikojakojana dia alaharo aloha ny milina ary avy eo miditra ao anatiny;
d. Esory ireo sombin-kazo izay mety hanitsaka na hikasika ilay faritra hisorohana azy ireo tsy ho voarangotry ny fako;
d. Hamafa ny diloilo fanosorana sy ranoka puce amin'ny toerana mety hivezivezenao hisorohana ny fivezivezena.
3) Rehefa nosoloina singa vaovao dia tsy mahazo manary ilay singa taloha alohan'ny hanamafisana ny asany mahazatra.
3.3 zo sy andraikitra amin'ny fikojakojana
1) Raharaha avelan'ny mpandraharaha hitantana azy:
a. Sekely vita amin'ny visy sy takela-by izay misy fiatraikany amin'ny fahamarinan'ny fitaovan'ny milina.
b. Sombiny novidiana tsotra, toy ny fuse, switch, circuit solika, fantsom-pifandraisana, sns.
2) Ny mpiasa manana ny mari-pahaizana matihanina dia takiana amin'ity asa fikojakojana manaraka ity:
a. Fandosiran-tsilo be loatra;
b. Manana feo tsy ara-dalàna ny ampela;
d. Fikolokoloana visy;
d. Fikojakojana ny singa famindrana telo-axis (seza fandefasana, seza nut, tohana ary fitifirana, sns.).
e. Fikolokoloana ny magazine magazine.
f. Fandraisana an-tanana antsy sy fianjerana antsy
Masinina Lathe metaly
Masinina Lathe Masinina
Sora-kazo manapaka metaly marindrano
Mpiasa mahay matihanina 100+.
15+ taona niainana
Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny milina CNC
Fomba fampiasana latina metaly: asan'ny masinina latina banga
Inona no atao hoe Machine Lathe Metal? Fampiasana, famaritana, fiasa, fizarana, kisary
Fampidirana milina lathe: karazana milina Lathe 16
Masinina mpamatsy fitaovana China
Telefaona: + 86-15318444939
Telefaona: + 86-632-5656658
7 * 24 Ora
No 6 Park Area Industrial, Dadi Road, Tengzhou, Shandong, China